ESI GBANYỤỌ FLASH MGBE Ị NA-AKPỌ IPHONE - IOS - 2019
Otu esi gbanyụọ flash mgbe ị na-akpọ iPhone
Ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo ngwaọrụ nwere ikikere, nke na-enye ihe mgbaàmà mgbe ị na-eme oku na nkwupụta ọbịbịa. The iPhone enweghị ngwá ọrụ dị otú ahụ, mana dị ka onye ọzọ, ndị mmepe na-atụ aro na iji igwefoto igwefoto. O di nwute, obughi ndi oru nile nwere afọ ojuju na nghota a, ya mere, odi mkpa iji gbanyụọ oku mgbe akpokpo.
Gbanyụọ flash mgbe ị na-akpọ na iPhone
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ iPhone na-eche eziokwu ahụ na ndagwurugwu maka oku na-abata na ọkwa ama arụ ọrụ site na ndabara. N'ụzọ dị mma, ị nwere ike ịkwụsị ya na nkeji ole na ole.
Mepee ntọala ma gaa na ngalaba "Isi ihe".
Họrọ ihe "Nweta Nweta Nile".
Na ngọngọ "Ịnụ" họrọ "Flash Alert".
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ihe a kpamkpam, megharịa ihe mmịfe ahụ nso nso "Flash Alert" na nkwụsị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ ọrụ ọkụ naanị maka oge ndị ahụ mgbe agbanyere ụda na ekwentị, rụọ ọrụ ahụ "Na ọnọdụ nkịtị".
A ga-agbanwe ntọala ahụ ozugbo, nke pụtara na ị ga-emechi windo a.
Ugbu a ị nwere ike ịlele ọrụ ahụ: maka nke a, gbochie ihuenyo IP, wee kpọọ ya. Ntanụ ọkụ ọkụ ndị ọzọ ekwesịghị imekpa gị ahụ.